Ukutya okulula imihla ngemihla
Ukulungiselela ukutya okulula kwimihla ngemihla, uya kusindisa ixesha elide kwaye uzithokoze wena kunye nabathandekayo bakho.
Ukulungiselela: 30 imizuzu.
4 isitshalo seqanda,
Itafile e-2. ipofile yeoli,
150 g yeayonnaise,
I-1/2 indebe ye-walnuts,
1 iqela le-dill kunye ne-cilantro,
iinqumle zerharnate ukuhlobisa.
Ukuhlamba ama-eggplants, usike umsila kunye necawu kunye neengcezu ezincinci. Emva koko ityuwa uze udibanise imizuzu engama-20 ukwenzela ukuba ubuhlungu buye. Okanye, bamba ii-eggplants ecoliweyo emanzini anosawoti. Sika ii-slice ze-eggplant nge-napkin kwaye uzifake kwi-olein ioli ye-sunflower uze ube mnyama. Vumela ii-eggplants ukuba zipholile.
Ukulungiselela ukuzaliswa, i-garlic, i-dill kunye ne-coriander idibanisa kakuhle, xuba ngamantongomane aqoshiwe, i-pepper emnyama kunye ne-mayonnaise. Emva koko, isahlulo ngasinye sesitshalo seqanda se-greed se-cooked cooking and roll roll. Ukulungele ukutywala ifriji efrijini malunga neyure eli-1. Xa ukhonza etafileni, ubeka imiqulu kwisitya, uhobise ngemifuno uze ufefe ngembewu yegromegranate. Iphulo: ukwenza i-juicy filling, kodwa ingasasazeka, sebenzisa i-mayonnaise yobuninzi bobuninzi. Emva koko i-rolls iya kugcina isimo esifanelekileyo.
Ukulungiselela: 60 iminithi.
1.8 kg yeengulube zengulube,
3 utamatisi ophuzi,
2 obomvu obomvu,
2 isitshalo seqanda,
1 intloko ye-onion ebomvu,
Itafile e-4. ipofile yeoli,
250 ml yomhluzi wenyama, umsila obomvu nomhlophe,
imifino, ityuwa ukula.
Inyama yengulube ihlanjwe, imiswe kakuhle kunye nephepha leshidi kunye nokunqunyulwa kwimiqolo yesentimitha engama-3. Bese unqumle ngamnye ngesimo "ipokhethi", ixesha lonyaka ngetyuwa kunye nepilisi. Geza utamatisi, i-pepper kunye ne-eggplants. Kwiphepsi ususe ingundoqo. Emva kwayo yonke imifuno yenza umququ. Hlanganisa ukuzaliswa kwisitya esixubileyo, ityuwa, i-pepper, yongeza imifuno edibeneyo kwaye udibanise. Iziqwenga zenyama egciniweyo kunye nokuzaliswa kwemifuno, ukubopha ngentambo yokucoca kunye nefry kwioli yelanga ye-oleina kude kube mnyama. Dlulisa inyama kwisidlo sokubhaka, uthele umhluzi uze ufake efubeni i-30-40 imizuzu. Hlola ukulungiswa kwenyama kwaye uyisuse kwi-oven. Ngaphambi kokukhonza, khululwa "iipokotshi" ezivela kwimicu, zibeke phezu kwiplani uze ufefe ngemifuno etyongwe. Ncedisa isitya eshushu. Iseluleko: inyama "iipokotshi" iya kuba yinkcenkceshe kakhulu, ukuba uya kudla amanzi amanzi kunye nomxube we-broth kunye neoli, eyakhiwa kwi-brazier. Ukugqithwa kwegolide kungafezwa ngeoli yelanga.
Ukulungiselela: 40 iminithi.
1 ipod yepilisi eluhlaza okomhlaza,
Itafile e-2. iipuni zeoli,
700 g weetato,
1.5 ilitha yemifuno yemifuno,
400 g iimbotyi ezimhlophe ezimhlophe,
220 g ye-pasta ngohlobo lwee-shells,
Itafile e-4. Iipuni zeviniga yebhasam,
100 g yeeshizi,
umthunzi omnyama womhlaba, ityuwa ukula.
I-onion ikhasi kunye nokucoca. Iinqotyi zihlamba kakuhle, zitshize kunye ne-grate kwi-grater enkulu. I-pod ye-green pepper wash wash, yome ngehayile yecwecwe, yinqumle kwisiqingatha kwaye ususe umnqweno kunye nembewu. Yinqumle inyama kwiikerubhi ezincinci. Kwi-pan yokucima, ukushisa i-oyile yemifuno kunye nefry imifuno elungiselelwe imizuzu emi-5. Sika isicato ngasinye, siphuphe emanzini abilayo imizuzwana engama-30, uyisuse kwaye uyifake. Emva koko gaya iziqhamo, wongeza kwiimifuno ezomileyo uze udibanise imizuzu emi-5-7. Yibilise ngokuhlukileyo umhluzi uze ungeze imifuno. Yizisa emathunjini, ubeke ubhontshisi obusiniweyo, i-pasta uze upheke imizuzu eyi-10. Emva koko faka iviniga yebhasamisi, ushizi ogayiweyo, ityuwa, i-pepper uze ufike emathunjini. Ngaphambi kokukhonza, unokongeza imifuno ekhethiweyo kwisitya ngasinye.
I-Salmon kunye ne-basil sauce
500 g ye-salum fillet,
250 g yeayonnaise,
Itafile e-4. iipuni ezityiweyo zii-anyanisi,
Itafile e-2. iipuni eziqwengqwe phantsi,
I-drop 1 ye-Tabasco sauce.
Geza iifomthi ze-salmon kumanzi abandayo abandayo kwaye wome ngehayile yephepha. Emva kwexesha ityuwa, pepper uze ufefe kakuhle ioli yelanga. Emva koko i-salmon iphekwe ngaluphi na indlela: gazinga epanini, yenza kwi-boiler kabini okanye ubhaka ehovini uze uphekwe. Lime uhlambe kunye ne-peel, kwaye usike inyama ibe yimincinci encinci. Geza i-anyanisi eluhlaza kunye ne-basil, eyomile kwaye idibanise kakuhle. Ukulungiselela i-sauce, udibanise i-mayonnaise kunye ne-anyanisi eluhlaza, i-basil, i-lime tincetu, i-drop of Tabasco sauce kwaye udibanise kakuhle. Xa ukhonza, wabeka intlanzi kwisitya, uthele phezu kwe-sauce elungiselelwe kunye nexesha kunye ne-lime kunye nemifino. Kuhlobisa ungakhonza iibhatates ezincinane ezibilisiwe. Icebiso: gcina iliso ngexesha - i-salmon fillet ilungiswe ngokukhawuleza. Kwaye ukulungiselela i-sauce enobuncwane kunye neendlela ezintle eziqhelekileyo zokunambitha ziya kuvumela i-mayonnaise ecocekileyo ye-Olein "i-Premium"
I-Ratatouille nge-garlic sauce
2 iipods ezibomvu pepper,
1 isitshalo seqanda,
20 g ye-thyme eluhlaza,
2 iifriji ze-rosemary,
1 iqabunga lebhu,
Itafile e-4. iinqwelo zeoli yeoli,
Itafile e-2. iipuni eziqwengwe ngepesley,
750 ml ye yogurt yemvelo,
Sika utamatisi, udibanise emanzini abilayo imizuzwana engama-30, ususe nge-scraper, u-peel uze unqume inyama. I-onion ikhasi kunye necawu. I-sweet pepper, susa umnqweno kunye nembewu, usike inyama ibe ngamacube. Uhlamba lwe-eggplant kwaye uthathe iinqununu. Ukuhlamba i-Zucchini kwaye uthathe iinqununu. I-Thyme kunye ne-rosemary bayibopha kwisiqwenga kunye neqabunga le-laurel. Iiglicu zityunjwe. Esikhatyeni, sitshisa ioyile yemifuno kunye ne-frory isitshalo seqanda 5 imizuzu. Yongeza ii-anyanisi, i-pepper e-sweet, isiqingatha segarlic kunye ne-zucchini. Yonke inhlobo yemifuno gazinga imizuzu emithathu. Emva kokubeka isigxina se-parsley. I-Stew 7 imizuzu. Yongeza iqela lemifuno, utamatisi, ityuwa, ipilisi kwaye upheke imizuzu eyi-15. Emva koko ususe imifuno ngamagqabha e-laurel. Hlanganisa igarlic eseleyo kunye ne-parsley nge yogurt, ityuwa, pepper. I-sauce eyiphumela ihanjiswa ngokwahlukileyo. Iseluleko: yonke imifuno yale nqanawa yinqumle inkulu, ukwenzela ukuba iziqwenga zingaphelelwa yindlela yokucima
Ukulungiselela: 50 iminithi.
400 g fresh raspberries,
250 g yeeshukela ezinobisi,
500 g cottage shizi 18%
100 ml ye yogurt yemvelo,
150 g yeebhayisikiti zebhakiti,
50 g ye tsholeta ebuhlungu,
amaqabunga ambalwa weinti okanye i-lemon balm yokulungisa.
I-Raspberries ihlalutye ngokucophelela, ihlambulukile, ibe yindawo yomsila kwaye ucoce ngobumnene amanzi aphelileyo. Bese uyifake kwiphilisi yephepha uze uyomise. Hlanganisa i-300 g yamajikijolo kunye ne-sugar powder (150 g), yenza i-blender nge-blender uze uyisule nge sieve. Phumla ama-berries asele ukuhlobisa i-dessert. I-Cottage ushizi uhlambele nge-sieve rhoqo, ukwenzela ukuba ibe yithenda kwaye ifane ngokufanayo. Emva koko xuba kunye ne-yoghurt yemvelo kunye noshukela olusele lukhuni, yongeza i-1/4 ye-raspberry puree enokuphuma kunye ne-whisk ene-mixer. Icookie ye-tsokolate yanyunyiweyo okanye icosiwe kwi-blender. Lungisa iiglasi eziphezulu kwaye uzifake okwezinye i-yoghurt kunye noshukela ophuhliweyo, ama-biscuits kunye ne-raspberry puree. Isifriji imizuzu engama-30. Ishokolethi enobungozi ipholile kakuhle, kwaye ulungelelanise nejezi. Geza amaqabunga ama-mint kwaye ubomile ngophawu lwephepha okanye i-napkin. I-dessert ephelileyo ihlotshiswe nge-chips, iifti zamanzi kunye nama-berries aseleyo. Icebo: ekwenzeni le dessert e-freshspirries, ungatshintsha inani elifanayo elitsha
Ukulungiselela: 90 imizuzu.
500 g ama cherries amasha,
400 g yebhotela,
300 g yeeshukela eziqingqiweyo,
Iipakethi ye-velaji e-1,
1 ityitye yetyuwa,
300 g yomgubo,
1 isikhwama se powder baking,
Itafile e-2. iipuni zecocoa powder,
320 ml yobisi,
Iipakethi ye-pudding e-vanilla eyomileyo,
150 g ye tsholeta enobuhlungu.
Ukushisa kwe-oven ukuya kwi-180 C. Iikherries zihamba, zihlambe, zome kakhulu kwiphilisi yempuphu kwaye zisuse kakuhle ilitye. 200 g ibhotela ebetywe nge-200 g yeeshukela ezinqambileyo, i-vanilla ishukela kunye netyuwa de ifikeleleke. Omnye ngokubetha amaqanda, emva kokuxoka ngokucophelela. Ukuhluma kwemifuno nge powder yokubhaka, udibanise ne-egg-and--blue ibhontshi uze uxoke inhlama. Isiqingatha intlama, faka kwiphepha lokubhaka. Kwintlama eseleyo, yongeza i-cocoa powder kunye ne-20 ml yobisi. Yibeke phezu kwenhlama yokukhanya kwaye udibanise kakuhle. Beka ii-cherry ezilungiselelwe, zifakwe ehovini uze ubhakale imizuzu engama-25. Ngokhilimu, pheka i-pudding, ungeze ubisi kwaye ushiye iswekile kuwo. Vumela ukupholisa nokudibanisa kunye ne-200 g yeoli epholileyo. Phula ikhekhe ngekrimu uze ufake efrijini imizuzu engama-30.
Ukupheka kwe-ginger baking
Impepha ye Spring: ikheke lezithelo zegrrus kunye namajikijolo kunye ne-scab
Indlela yokupheka ekhaya nge-brushwood?
Ukupheka okulula okupheka
Ukupheka okukhawulezayo kunye nokumnandi okupheka
Yintoni yokupheka uNyaka omtsha we-2018 Inja: zokupheka izitya ezintsha ezithambileyo zetafile
Ikhasi leZidlo zokupheka Ukupheka
Iifuno ezilinywayo kwi-cosmetology
Indlela yokukhetha umdaniso womtshato wokuqala?
I-mini-cutlets ukusuka kwi-turkey ukuya kwi-steamed
Indlela yokukhulisa imifuno kwifestile
Ukuzichaza ngokwabo ukuhlolwa kwegazi kubaxhasi bamagciwane
Indlela yokuqinisa impilo yengane entwasahlobo
I-cranberry sauce kunye nama-orang
Ungayifumana njani inani eligqibeleleyo ngaphandle koqeqesho?
Umfanekiso omtsha yonke imihla: indlela yokusebenzisa kakuhle umthunzi we-toner ekhaya
Umntu womntu ngezipikili
Ziziphi iimeko ezithandabuzayo?